Muwaadin Mareykan Madow oo 44 sano u xirnaa dembi uusan gelin oo xabsiga laga sii daayey… – Hagaag.com
Muwaadin Mareykan Madow oo 44 sano u xirnaa dembi uusan gelin oo xabsiga laga sii daayey…
Posted on 2 Seteembar 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Muwaadin Mareykan ah oo lagu magacaabo Ronnie Long ayaa dib u helay xoriyadiisa kadib 44 sano oo xabsi ku jiray, isagoo lagu eedeeyay inuu kufsaday haweeney cadaan ah iyadoo aan la heyn wax cadeyn ah oo la taaban karo, tani waxay timid iyadoo shaki laga muujinayo cadaalada maxkamada iyo su’aalo ku saabsan waqtiga lasii daayey.
Wargeyska Faransiiska ee Le Point ayaa warbixintiisa ku sheegay in Long – oo 44 sano ku qaatay xabsiyo – ay ku adkaatay inuu qariyo dareenkiisa markii uu ka baxay xabsiga New London, North Carolina, isagoo ku yiri hadal uu siiyay kanaal maxalli ah, “Weligaa ha is dhiibin.”
Long, oo 64 jir noqday, ayaa dib u helay xorriyadiisa ka dib muddo ku dhow 44 sano oo uu xabsi ku jiray, waxaana lagu xukumay 80 sano oo xabsi ah.
Markii Long lagu eedeeyey dambi ah inuu kufsaday haweenay cadaan ah 1976 magaalada Concord, North Carolina, xeerbeegtida waxay ka koobnayd gabi ahaanba garsoorayaal cadaan ah, mana jirin wax cadeymo maadi ah oo ku saabsan xukunkiisa, sida ay qortay jariidada Faransiiska.
Wargeysku wuxuu intaa ku daray in Long uu halgan dhib badan ugu jiray tan iyo markaas si uu u caddeeyo inuusan dambi laheyn, isagoo gacan ka helaya koox qareenno mutadawiciin ah, wuxuu ka shaqeeyay sidii uu u muujin lahaa “caddaalad xumada” xukunka isaga ka dhanka ah.
Sannadkii 2005, kooxdii qareennada waxay heleen caddayn adag oo ah in Long uusan dambi lahayn, kuwaas oo ah muunado shahwada iyo faro laga helay goobta fal dambiyeedka ka dhacay, taas oo aan u dhigmin shahwaddiisa ama farahiisa, laakiin mas’uuliyiintu way diideen inay ku tiirsanaadaan caddaynta wakhtigaas, sida uu wargeysku ka soo xigtay CNN.
Jariidada ayaa soo xigatay xaakim Stephanie Tracker oo tiri “macluumaadka qaar ee soo ifbaxay maxkamada kadib waxay muujiyeen qaab walaac iyo tuhun ah oo ku saabsan in si ula kac ah loo qariyey ama la isaga indha tiray cadeymaha maadiga ahaa.”
Ronnie Long ayaa warbaahinta u sheegay “Waxay ahayd waddo dheer, laakiin way dhammaatay, way dhammaatay hadda.”
Dhinaca kale Ashley – oo Long guursaday 2014 isagoo ku jira xabsiga ayaa bilowday olole lacag loogu ururinayo dhinaca Internet-ka si loo caawiyo ninkeed inuu ka soo kabsado saameyntii xukunkiisa mudada 44 sano aheyd, labo maalmood gudaheed waxaa lagu ururiyey lacag gaareysa 14 kun oo dollar.